Garowe oo kaalinta 1-aad ka gashay tartanka Qur’aanka Kariimka ah ee Gobolada Puntland. – Idil News
Garowe oo kaalinta 1-aad ka gashay tartanka Qur’aanka Kariimka ah ee Gobolada Puntland.
Posted By: Jibril Qoobey May 25, 2019
Magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa kaalinta kowaad ka gashay tartanka Qur’aanka Kariimka oo sannad kasta bisha barakaysan ee Ramadaan loo qabto dhammaan gobollada Puntland.
Tartanka xifdinta 30-ka jus ee Qur’aanka kariimka ah oo Sabtida maanta ku soo xirmay masjidka Al-huda ee caasimadda Garoowe ayaa waxaa kaalinta kowaad ku guulaystay Maxamed Faysal Maxamuud oo ka socday dugsiga Qur’aanka Al-Aqsaa ee Garoowe waxaana abaal-marin loo siiyay gaari nooca NOAH.
Kaalinta labaad ee tartanka ayaa waxaa ku guulaystay Cabdullaahi Bashiir Maxamed oo ka socday dugsiga Qur’aanka Daarul-Quraa ee magaalada Boosaaso oo isna abaal-marin loo siiyay $1000 Dollar oo lacag ah halka kaalinta saddexaad uu galay Cabdisalaan Xassan Maxamed oo ka socday Daarul-Hudaa ee Qardho isagoo lagu abaal-mariyay $700 Dollar oo lacag ah.
Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan oo tartanka soo xiray ayaa abaal-marinnada ay mutaysteen guddoonsiiyay ardaydaasi kaalmaha hore ka galay tartanka Qur’aanka Kariimka gobollada Puntland.